အားလပ်ရက်အငှားလုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းနှင့်အကြံပြုချက်များ | Zeevou ဘလော့ဂ်
Zeevou ဘလော့သည်ရေတိုငှားရမ်းခြင်းနှင့်အားလပ်ရက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းကမ္ဘာအတွက်အကြံဥာဏ်များ၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများနှင့်သတင်းများအတွက် ဦး ဆောင်ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ပို့စ်များနှင့်အညီနောက်ဆုံးပေါ်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဖြုတ်ချပါ။
အဝေးမှပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု - စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ
12 ခုနှစ်ဧပြီလ 2021
Lockdowns နှင့်ပုံမှန်စံအသစ်များသည်အဝေးမှအလုပ်လုပ်ခြင်းသည်သမားရိုးကျအလုပ်အစီအစဉ်များအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ …
Zeevou ၏အသစ်ပြောင်းခြင်းသည် OpenAPI နှင့် Zapier နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် Web Application ကိုပေါင်းစည်းစေသည်
Web Application ပေါင်းစပ်ခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ၎င်းသည်သင်၏စီးပွားရေးကိုမည်သို့အထောက်အကူပြုသနည်း။ 'Web Application ပေါင်းစည်းခြင်း'
11 ခုနှစ်ဧပြီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
ငှားရမ်းအိမ်ခြံမြေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတစ် ဦး ပြည့်စုံလမ်းညွှန်
Jill Mason မှ၊ VRScheduler ၏တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အိမ်တိုင်းတွင်ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပုံမှန်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်
7 ခုနှစ်ဧပြီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Airbnb အပေါ်စာရင်း - အကောင်းအဆိုး
အားလပ်ရက်အငှားစာချုပ်မန်နေဂျာများစွာအတွက်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို Airbnb တွင်စာရင်းပြုရန်လွယ်ကူသောငွေကိုရရှိစေသည်။
3 ခုနှစ်ဧပြီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
သင်၏ #shorttermrental #holidaylet #airbnbbusiness #holidayrental တွင်တိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။ ဘာလဲမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
29 မတ်လ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
25 မတ်လ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Airbnb IPO အကြောင်းအချက်အလက်များ
လအနည်းငယ်အကြာ၊ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာတွင်အဲယားဘတ်သည်လူသိရှင်ကြားဖြစ်လာသည်။ Airbnb IPO တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း
23 မတ်လ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အနာဂတ်သည်ပြောင်းလဲနေသော - ကာလတိုငှားရမ်းခြင်းအောင်မြင်မှုအတွက်ဒေတာနှင့်နည်းပညာများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
ဒီပွင့်လင်းမြင်သာသော guest ည့်သည်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်တက်ကြွသောစျေးနှုန်းနှင့်မည်ကဲ့သို့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါလိမ့်မည်
21 မတ်လ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
နွေ ဦး ရာသီမှာအီစတာကိုသုံးဖို့ငါပဲရစ်ကိုသွားဖို့စီစဉ်နေတုန်းပဲ
17 မတ်လ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Booking.com အထူးအစီအစဉ်များ (၂၀၂၁ Ultimate Review)
13 မတ်လ 2021	2 မှတ်ချက်
Hosts က Airbnb Superhost အခြေအနေကိုလိုက်ဖမ်းသင့်သလား🥇
များစွာသော Airbnb host များ၊ အထူးသဖြင့်မကြာသေးမီကပါ ၀ င်သောသူများသည် Airbnb Superhost ဖြစ်လာရန်ကြိုးစားကြသည်
11 မတ်လ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
7 မတ်လ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Xero နှင့် QuickBooks အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
သူတို့ရဲ့အချိန် - ထိရောက်မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်မှုတို့ကြောင့် Cloud-based စာရင်းအင်းဆော့ဖ်ဝဲများသည် ၀ ယ်လိုအားထက်ပိုများလာခဲ့သည်
6 မတ်လ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
၉ လိုအပ်သော Vacation House စည်းကမ်းများ
4 မတ်လ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Airbnb နှင့် Vrbo: အားလပ်ရက်အငှားငှားရမ်းသူပိုင်ရှင်များသိသင့်သောအချက် (၆) ချက် (၂၀၂၁ ပြင်ဆင်ချက်)
အားလပ်ရက်အငှားစာချုပ်မန်နေဂျာ (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောတိုက်ခန်းများကိုငှားရမ်းသူတစ် ဦး အနေနှင့်သင်၏အဓိကပန်းတိုင်မှာဖြစ်သည်
2 မတ်လ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Hoststs နှင့် Touchstay - ကျွန်ုပ်၏ဒီဂျစ်တယ်လမ်းညွှန်အတွက်မည်သူနှင့်အတူသွားသင့်သနည်း။
ဒီနေ့ခေတ်မှာအားလပ်ရက်အငှားအိမ်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့တိုက်ခန်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူတွေအတွက်အရေးအကြီးဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲကတစ်ခု
1 မတ်လ 2021	2 မှတ်ချက်
မည်သည့်နေရာ (၆) ခုသည်စာအုပ်များအများဆုံးယူဆောင်လာသနည်း။ (၂၀၂၀ နောက်ဆုံးအခြေအနေ)
မည်သည့်ဆိုဒ် (၅) ခုသည်ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းမှုအများဆုံးပြုလုပ်သည်ကိုမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်
24 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2021	3 မှတ်ချက်
Zeevou သည် Airbnb အဆင့်တိုးမြှင့်ပေးရန် Airbnb Messaging Autoresponder ကိုလွှတ်ပေးခဲ့သည်
“ Airbnb အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ SEO အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ Booking.com အဆင့်သတ်မှတ်ချက်” သည်အရာရာတိုင်းသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အဆင့်တိုင်း
23 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
iCal vs API: Channel Managers များကို iCals သို့မဟုတ် API မှတဆင့် OTA များသို့မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်နည်း။
ရုပ်သံလိုင်းမန်နေဂျာများ၊ OTAs, iCal နှင့် APIs အကြောင်းပြောနေတာတွေကြားဖူးလား
22 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Booking ပိုရရန်အတွက်အထူးလျှော့စျေးကိုအသုံးပြုရမလား။ တိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်အထူးလျှော့စျေးလုပ်ပါ
16 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Zeevou သည် VRMB ၏အဓိကသော့ချက် 2021 ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်
13 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှု၏အဓိကအခန်းကဏ္7၇
12 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Zeevou သည် ၂၀၀၀ LUXlife မဂ္ဂဇင်း၏ it ည့်ဝတ်ပြုခြင်းဆုကိုရရှိခဲ့သည်
Zeevou သည် LUXlife မဂ္ဂဇင်း၏နှစ်စဉ်နှစ်စဉ် Hosp ည့်ဝတ်ပြုခြင်းဆုကိုရရှိခဲ့သည့်အတွက်ဂုဏ်ယူမိပါသည်
9 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Online Check-In နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့် Check-in များကိုကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း
ကြာမြင့်စွာကတည်းကယုံကြည်ပြီးတံခါးဝ၌သင်၏ guests ည့်သည်များကိုနှုတ်ဆက်သည်
8 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Zeevou အကယ်ဒမီ၊ ကာလတိုငှားရမ်းခြင်းအတွက် Ultimate Learning Space
4 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အားလပ်ရက်အငှားလုပ်ငန်း၌ Guest ည့်သည်အတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်း ၆
ကျွန်တော့်အစ်မနဲ့ကျွန်တော်ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ခရစ်စမတ်အားလပ်ရက်တွေမှာရောမကိုသွားလည်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်
1 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
30 ဇန်နဝါရီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Eco-friendly အားလပ်ရက်အငှားငှားရမ်းရန်အကြံဥာဏ် ၁၀ ချက်
28 ဇန်နဝါရီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
25 ဇန်နဝါရီလ 2021	2 မှတ်ချက်
သင်၏မကြာသေးမီက blog post တွင်သင့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကင်ပိန်းတစ်ခုကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း
24 ဇန်နဝါရီလ 2021	2 မှတ်ချက်
22 ဇန်နဝါရီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
ပျမ်းမျှအီးမေးလ်အသုံးပြုသူသည်တစ်လလျှင်စီးပွားဖြစ်အီးမေးလ် ၄၁၆ လက်ခံရရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ inboxes သောအချက်ဖြစ်ပါသည်
18 ဇန်နဝါရီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
ထိပ်တန်း4လူရွှင်တော်အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှု Engaging Facebook Post Ideas
ကာလတိုငှားရမ်းခမန်နေဂျာကိုအိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအချို့ကို Facebook post အတွေးအခေါ်များကိုမျှဝေပါ။
11 ဇန်နဝါရီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
9 ဇန်နဝါရီလ 2021	1 မှတ်ချက်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်၊ အင်္ဂလန်ရှိ ality ည့်ဝတ်ပြုခြင်းနေရာများအတွက်ကန့်သတ်ချက်အသစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အိမ်ခြံမြေမန်နေဂျာများအဘယ်အရာသိထားသင့်သည်
5 ဇန်နဝါရီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
ကျွန်ုပ်၏ပစ္စည်းများကို Booking.com တွင်စာရင်းပြုစုသင့်သလော။
Booking.com မှာဘယ်လိုစာရင်းပြုစုရမလဲ။ သင်အားလပ်ရက်အငှားစာချုပ်မန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်သင်အလိုရှိသည်
4 ဇန်နဝါရီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခြင်း Facebook ကြော်ငြာများမှမည်သို့အကျိုးခံစားရမည်နည်း
အားလပ်ရက်အငှားငှားရမ်းခများအတွက် Facebook စျေးကွက်အတွက်လမ်းညွှန်
စတင်ဖွင့်ကတည်းက Facebook Marketplace နာမည်ကိုကြားခဲ့ရတာကောင်းတယ်
28 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Airbnb အခွန် ၁၀၁ - Airbnb အခွန်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သမျှ
Airbnb သည်အပို ၀ င်ငွေကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏အားလပ်ရက်များကိုငှားနိုင်သည်
27 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
၎င်းသည် ၂၀၂၁ နီးပါးရှိသော်လည်း blogging သည်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်
24 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
21 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
သင်၏တိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ ROI ကိုမည်သို့တွက်ချက်ရမည်နည်း
19 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် Google Analytics အကောင့်
သင်ပိုမိုတိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်းဟုမဆိုသူတစ် ဦး တည်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုမန်နေဂျာမှတ်မိနိုင်သလား
17 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Airbnb နှစ်ရှည်ငှားရမ်းခြင်း - ၎င်းသည်အကြံဥာဏ်ကောင်းလား။
Airbnb ကိုမည်သည့်နေရာသို့မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၏တိုတောင်းသောသက်တမ်းအားလပ်ရက်ကနေ
14 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
KPIs၊ အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းများကသင့်အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခ (သို့) အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာရန်ကူညီသည်။
11 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
8 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
ပိုမိုတိုက်ရိုက် Bookings ဘယ်လိုရနိုင်မည်နည်း
6 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020	4 မှတ်ချက်
2 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020	6 မှတ်ချက်
တိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်သော OTAs၊ မည်သူသည်သင့်အားပိုမိုအကျိုးအမြတ်များစေမည်နည်း။
အားလပ်ရက်အငှားချထားသူပိုင်ရှင်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောတိုက်ခန်းအော်ပရေတာများကြားတိုက်ရိုက်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာရှိသည်
30 နိုဝင်ဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အိမ်ငှားစစ်ဆေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သမျှ
26 နိုဝင်ဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
24 နိုဝင်ဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှု KPIs သင်ခြေရာခံရန်လိုအပ်သည်
သင်၏အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခ (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုရှိသောတိုက်ခန်းလုပ်ငန်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသင်မည်သို့တိုင်းတာသနည်း။ အဲဒီမှာ
21 နိုဝင်ဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Vacation Rental CRM ကိုအသုံးပြုခြင်း
19 နိုဝင်ဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
16 နိုဝင်ဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
ယနေ့ခေတ်တွင်အားလပ်ရက်အငှားစာချုပ်ပိုင်ရှင်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောတိုက်ခန်းအော်ပရေတာများအသုံးပြုနိုင်သည့်ကိရိယာများစွာရှိသည်
14 နိုဝင်ဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အကောင်းဆုံး Channel Manager ဆော့ဝဲလ်၏ Ultimate လမ်းညွှန်
12 နိုဝင်ဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
RentalGuardian မှ Master Cancel ရပ်စဲခြင်း
10 နိုဝင်ဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်မှုသည်အစမှ စ၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်
9 နိုဝင်ဘာလ 2020	13 မှတ်ချက်
Multiple Properties ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
7 နိုဝင်ဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသည်သင်၏ your ည့်သည်များအားကြယ်ငါးပွင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု
5 နိုဝင်ဘာလ 2020	2 မှတ်ချက်
သင်၏အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် CRM ကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
2 နိုဝင်ဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Multiple Properties ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း၏စိန်ခေါ်ချက်များမှာအဘယ်နည်း။
သင်၏အိမ်ခြံမြေအားလပ်ရက်ငှားရမ်းသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ခြင်းသည်သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ညှိနှိုင်း။ မရပါ
29 အောက်တိုဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
စီးပွားရေးခရီးသွားများပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ပုံ - ထိပ်တန်းကော်ပိုရေးရှင်းအိမ်ရာကုမ္ပဏီ ၁၀ ခု၏စာရင်းတစ်ခု
26 အောက်တိုဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် iCal ပြက္ခဒိန်
21 အောက်တိုဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
16 အောက်တိုဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုသိကောင်းစရာများ - အောင်မြင်သောအိမ်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကိုအဘယ်အရာပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
14 အောက်တိုဘာလ 2020	4 မှတ်ချက်
13 အောက်တိုဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အားလပ်ရက်ငှားရမ်းမှု ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ
OTAs (Online Travel Agencies) နှင့်အိမ်ခြံမြေစာရင်း ၀ ဘ်ဆိုက်များသည်၎င်းတွင် ပို၍ အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်
7 အောက်တိုဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
သင်၏ Airbnb ငှားရမ်းခကိုကာကွယ်ရန်သိကောင်းစရာများ
SUPERHOG ဘွတ်ကင်တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာ Kamila Miller ၏ post ည့်သည်တော်ဖြစ်သည်။
အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုလုံခြုံရေး: လိမ်လည်ခြင်းနှင့်ခိုးယူခံရသည့် IDs များ (သို့) Credit Card ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ။
လိမ်လည်ခြင်းနှင့်ခိုးယူခံရခြင်း IDs များ (သို့) ခရက်ဒစ်ကဒ်များကိုတားဆီးခြင်းသည်မည်သည့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအတွက်မဆို၊
4 အောက်တိုဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Airbnb Co-hosting အခကြေးငွေများ
Hosting သည်ခက်ခဲသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ သငျသညျရတဲ့ကနေတစ်ခုလုံးအများကြီးဂရုစိုက်ဖို့ရှိသည်
အားလပ်ရက်အငှားအိမ်ခြံမြေဝယ်ယူရန်ပုံစံ - အခမဲ့နမူနာ
30 စက်တင်ဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အားလပ်ရက်အငှားစာချုပ်များအပေါ် COVID-19 ၏သက်ရောက်မှုများ - ကာလတိုနှင့်အလယ်အလတ် ၀ က်ဘ်ဆွေးနွေးပွဲ
26 စက်တင်ဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Lost Airbnb Reviews ည့်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်မည်သို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမည်နည်း။
နှစ်များတစ်လျှောက် Airbnb သည်ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်
24 စက်တင်ဘာလ 2020	4 မှတ်ချက်
အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ - နမူနာပုံစံ
22 စက်တင်ဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
OTAs တွင် Alias ​​သို့မဟုတ်အမည်မသိအီးမေးလ်လိပ်စာဆိုတာဘာလဲ။ မင်းသတိထားမိမှာပါ
18 စက်တင်ဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခြင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် SEO လမ်းညွှန် ၈ ချက်
7 စက်တင်ဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
ထိပ်ဆုံး ၇- ၂၀၂၀ စာအုပ်သည်သင်မလွဲသင့်သည့်တင်ပြချက်များကိုပြသပါ။
၂၀၂၀ Book Direct Show နှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်မျှသိသနည်း။ အဆုံးစွန်ကဘာလဲ
1 စက်တင်ဘာလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Zeevou ၏ထူးခြားချက်များသည်အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှု SEO အတွက်မည်သို့ကူညီသနည်း
26 သြဂုတ်လ 2020	1 မှတ်ချက်
Airbnb ဈေးနှုန်းကိရိယာများ - စျေးနှုန်းအပြင်စျေးနှုန်းနှင့်ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကဘေးထွက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (2021 Update)
Airbnb Beyond စျေးနှုန်းနှင့် PriceLabs ကဲ့သို့သော Airbnb စျေးနှုန်းများသည်သင်လိုအပ်သည်
6 သြဂုတ်လ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အကောင်းဆုံး PMS ရွေးနည်း
အသင့်တော်ဆုံးသောအိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (PMS) ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အချိန်ကုန်ပြီးမကြာခဏရှုပ်ထွေးစေသည်
4 သြဂုတ်လ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Zeevou ၏ကော်မရှင်ကင်းရှင်းသည့် Booking Platform, Zeevou Direct၊ The New York Times တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်
Zeevou ၏ကော်မရှင်မရှိသောအိမ်ခြံမြေစာရင်း Zeevou Direct တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်ဝမ်းမြောက်မိပါသည်
19 ဇူလိုင်လ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
သင်၏ Airbnb ests ည့်သည်များထံအီးမေးမရှိပါ။ Airbnb မှတဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ Off-Platform Tools မှတစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း!
Airbnb က၎င်းတို့သည် host များမှတဆင့်အီးမေးလ်များပေးပို့နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်
13 ဇူလိုင်လ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Elavon မှ Saya Pay Rebranding ကို Opaya သို့ပေးခဲ့သည်
Sage Pay ကိုတံဆိပ်ခတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၃ ရက်မှစ၍ Sage Pay ကို Opaya ဟုလူသိများလိမ့်မည်
11 ဇူလိုင်လ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Zeevou သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အကောင်းဆုံးတိုက်ရိုက် Booking Platforms များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
Natacha Parmantier သည်အားလပ်ရက်အငှားရမ်းသည့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာအကြံပေးအစီအစဉ်ကိုရယူသည်
21 ဇွန်လ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Zeevou သည်၎င်း၏မဟာဗျူဟာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုလမ်းပြမြေပုံပုံစံဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ The
20 ဇွန်လ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခြင်းလမ်းညွှန်စာအုပ်၏အကျိုးကျေးဇူးများ ၀ ယ်ယူနိုင်သောအိတ်သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်အငှားစာအုပ်အဆင်သင့်ရှိခြင်း
10 ဇွန်လ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ - ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခု
Zeevou သည်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေစခန်း ၁၀ နေရာတွင်ထိပ်ဆုံးစာရင်းဝင်ခဲ့သည်
5 ဇွန်လ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင် Google My Business အကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါနှင့်မည်သို့ပြုလုပ်သည်ကိုသတိရပါ
3 ဇွန်လ 2020	1 မှတ်ချက်
အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခများပိုင်ရှင်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုရှိသောတိုက်ခန်းအော်ပရေတာများအတွက်ကျွန်ုပ်၏ Google ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
သင့်ငွေနှင့်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာလုပ်သင့်သည်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည့်ဖုံးကွယ်ထားသော SEO အမှားများ
Hi Zeevou Universe၊ Booking.com, TripAdvisor, Expedia စသည်ဖြင့်အဘယ်ကြောင့်မြင့်တက်နေသည်ကိုသင်စဉ်းစားဖူးပါသလား။
2 ဇွန်လ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
၀ န်ဆောင်မှုရှိသည့်တိုက်ခန်းများနှင့်အားလပ်ရက်များငှားရမ်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Google
“ Google My Business” ခေါင်းလောင်းထိုးသံလား မဟုတ်ရင်ကောင်းပြီ၊ အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်တယ်
1 ဇွန်လ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
သင်၏ ests ည့်သည်များကိုအွန်လိုင်းသိရန်အဆင့် ၃
ကာလတိုငှားရမ်းခြင်းပိုင်ရှင်များသည်တိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်တော်လှန်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်ကြသည်
22 မေလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
နောက်ဆုံးသတင်းများ: Airbnb သည်ယူကေပြက္ခဒိန်ကိုတိုးချဲ့သည်
10 မေလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
7 မေလ 2020	1 မှတ်ချက်
ကာလတိုငှားရမ်းမှုပိုင်ရှင်အများစုသည် ၁၅% မှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိပေးဆောင်ကြသည်ကိုသင်သိပါသလား
1 မေလ 2020	1 မှတ်ချက်
Zeevou သည် ClickSend Integration ကိုကြေငြာခဲ့သည်
ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများသည်အိမ်ခြံမြေမန်နေဂျာ၏ toolbox တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သင်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သည်
25 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Breaking News: Booking.com သည် UK ပြက္ခဒိန်အားလုံးကိုမေလ ၉ ရက်အထိပိတ်ထားသည်
Booking.com သည်ယူကေပြက္ခဒိန်အားလုံးကိုမေလ ၉ ရက်အထိပိတ်ထားသည်။ Airbnb ၏ပိတ်ဆို့မှုပြီးနောက်ဘွတ်ကင်ပြက္ခဒိန်များအပြီးတွင်
21 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Zeevou ၏ Short ၀ ံဂေလိလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကာလတိုငှားရမ်းခြင်းအစီအစဉ်
Zeevou သည် Shortyz 2020 တွင်အကောင်းဆုံးချန်နယ်မန်နေဂျာဆုကိုရရှိခဲ့သည်
20 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020	4 မှတ်ချက်
သင်၏အိမ်ခြံမြေကိုကာလတိုငှားရမ်းရန်စီမံခန့်ခွဲရန်သင်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုရှာနေခြင်းရှိမရှိ
16 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
သင်၏ Airbnb ၏သန့်ရှင်းမှုကိုအဝေးမှစောင့်ကြည့်ပါ
14 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020	2 မှတ်ချက်
10 COVID-19 ၏ the ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုလျော့ပါးစေရန်သိကောင်းစရာများ
Coronavirus ဖြစ်ပွားချိန်မှာငါတို့အားလုံးမှာတူညီတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်၊ ဒါကပိုပါတယ်
9 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
1 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020	4 မှတ်ချက်
Airbnb ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Brian Chesky ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့သော Airbnb Cancelations အိမ်ရှင်ကလျော်ကြေးပေးခြင်းသည်သင်မဟုတ်ပါ
31 မတ်လ 2020	3 မှတ်ချက်
COVID-19 ပယ်ဖျက်ခြင်း - ပြန်အမ်းငွေနှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း
COVID-19 သည် the ည့်ဝတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းကိုအကြီးအကျယ်အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်မှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ စီးဆင်းမှု
29 မတ်လ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
28 မတ်လ 2020	5 မှတ်ချက်
ဤတွင် Zeevou မှဖွင့်လှစ်ထားသော Help Hearts ကိုကူညီပါ
ဤနေရာတွင်ကူညီရန် - ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့အကောင်းဆုံးကူညီနိုင်မည်နည်း။ COVID-19 ကူးစက်မှု၏အလငျး၌
22 မတ်လ 2020	2 မှတ်ချက်
COVID-19 နှင့် Airbnb Hosts - မည်သို့ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မည်နည်း
COVID-19 နှင့် Airbnb Hosts များ၊ တိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်း၊ Airbnb / Booking.com အသွားအလာပိုမိုများပြားခြင်း
19 မတ်လ 2020	4 မှတ်ချက်
Coryavirus ၏ Heyday အတွက် Staycations
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် Coronavirus ကူးစက်မှုနှုန်းတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှခရီးသွား more ည့်သည်ပိုများလာသည်
19 မတ်လ 2020	7 မှတ်ချက်
Zeevou မှအကောင်းဆုံး Channel Manager ဆုရရှိခဲ့သည်
အကောင်းဆုံးချန်နယ်မန်နေဂျာဆုအကောင်းဆုံးချန်နယ်မန်နေဂျာသည် Shortyz တွင်အငြင်းပွားဖွယ်အကောင်းဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်
14 မတ်လ 2020	5 မှတ်ချက်
Zeevou သည် ၂၀၂၀ မတ်လ ၂၀ ရက်တွင်စတင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ Zeevou သည်ကော်မရှင်မရှိသော OTA (Zeevou Direct) ကိုစတင်ထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း - Zeevou သည်၎င်း၏အထူးအိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုတရားဝင်စတင်ခြင်းကိုကြေငြာလိမ့်မည်
6 မတ်လ 2020	3 မှတ်ချက်
Zeevou နှင့် KeyNest တို့က Airbnb check-in များကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ပေါင်းစည်းမှုကိုကြေငြာခဲ့သည်
KeyNest နှင့် Zeevou တို့သည်၎င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအကြားပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ပေါင်းစည်းမှုသည်ကာလတိုငှားရမ်းခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်
6 မတ်လ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Zeevou က Short Stay Show 2020 - အခမဲ့လက်မှတ်တွေ
Zeevou ဟာဇာတ်စင်ပါတနာအဖြစ် ၂၀၂၀၊ မတ်လ ၁၂ ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာ Zeevou ဟာ ၀ မ်းသာပါတယ်
25 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Zeevou ၏စျေးနှုန်းချိုသာသောနည်းဗျူဟာအသစ်ကိုယခုတွင်ကျင့်သုံးလာပြီဖြစ်သည်။ စတင်မိတ်ဆက်ရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်
၀ ယ်လိုအားပြောင်းလဲမှုအပေါ် အခြေခံ၍ မှန်ကန်သောစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ရန်၊ ပြောင်းလဲနေသောစျေးနှုန်းချိုသာသော software ကိုအသုံးပြုရန်
27 ဇန်နဝါရီလ 2020	1 မှတ်ချက်
25 ဇန်နဝါရီလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Dynamic စျေးနှုန်းကဘာလဲ။ ပြောင်းလဲနေသောစျေးနှုန်းများသည်ပုံသေစျေးနှုန်းအတွက်ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
13 ဇန်နဝါရီလ 2020	4 မှတ်ချက်
Airbnb Crash - Direct ည့်သည်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရမည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း
Airbnb ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်နောက်ဆုံးညတွင်ပျက်ပြားသွားသည်။ Downdetector ၏အဆိုအရ Airbnb ပျက်ကျမှုဖြစ်စဉ်များ
10 ဇန်နဝါရီလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
5 ဇန်နဝါရီလ 2020	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
HOST 2019 တွင်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကြည့်ကြပါစို့။
HOST 2019 သည်အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်ကာလတိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုများကိုစုစည်းပေးသည်။
2 နိုဝင်ဘာလ 2019	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
HOST 2019 ရှိအားလပ်ရက်အငှားချခြင်းဆိုင်ရာမန်နေဂျာ
အားလပ်ရက်အငှားချသည့်မန်နေဂျာ Zeevou သည် HOST 2019. ၌ကျွန်ုပ်တို့ပြသမည်
8 အောက်တိုဘာလ 2019	1 မှတ်ချက်
ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ပြသခြင်းများအတွက် VAT သက်ဆိုင်ပါသလား။
ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ပြသခြင်းများတွင် VAT ကိုသက်ဆိုင်ပါသလား။ ယူကေအစိုးရသည်မူဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်သည်
8 အောက်တိုဘာလ 2019	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Airbnb စိတ်ကြိုက် URL များ
Airbnb host များက၎င်းတို့သည်စိတ်ကြိုက် URL များကို Superhosts အနေဖြင့်အသုံးချနိုင်သည်ဟုစတင်ပြောကြားခဲ့သည်။
7 စက်တင်ဘာလ 2019	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
သင်၏ SA လုပ်ငန်းအတွက်တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားစျေးကွက်ကိုအဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုရန်လိုသနည်း
16 သြဂုတ်လ 2019	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
guest ည့်သည်အီးမေးလ်လိပ်စာဘယ်လိုစုဆောင်းရမယ်ဆိုတာကိုသင်စဉ်းစားနေပါသလား။ အဘယ်ကြောင့်နှောင့်ယှက်ရသနည်း သူတို့ကိုသင်စာပို့နိုင်တယ်
29 ဇူလိုင်လ 2019	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
ကျွန်ုပ်သည် Channel Manager ကိုမည်သည့်နေရာတွင်လိုအပ်သနည်း။
သင်သည်မကြာသေးမီကaည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ဖူးပါသလား
23 ဇူလိုင်လ 2019	1 မှတ်ချက်
21 ဇူလိုင်လ 2019	11 မှတ်ချက်
Booking.com လေလံကန့်သတ်ချက်များ - ၎င်းတို့သည်အတိအကျဘာလဲ။
ဖယ်ရှားထားသော Booking.com လေလံကန့်သတ်ချက်များကဘာတွေလဲ။ သင်ကရနိုင်သည်
15 ဇူလိုင်လ 2019	1 မှတ်ချက်
ဂူဂဲလ်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏အလုပ်များမှုကိုမည်သို့တိုးမြှင့်ရမည်နည်း။ သင့်ရဲ့ထေိုအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်
5 ဇူလိုင်လ 2019	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
တည်းခို Gu ည့်သည်အရေအတွက်ကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်သည်
အဝေးမှထိန်းချုပ် Gu ည့်သည်အရေအတွက် - အဆင့်သုံးဆင့်တည်းခို guests ည့်သည်အရေအတွက်ကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်သည်
29 ဇွန်လ 2019	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
7 ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနေရာထိုင်ခင်းစီးပွားရေးကိုချုံ့ခြင်းအတွက်ထိပ်ဆုံးအချက်များ
သင်၏ R2R ၀ န်ဆောင်မှုရှိသောနေထိုင်မှုစီးပွားရေးကိုမည်သို့ကြီးထွားစေနိုင်သည်
17 ဇွန်လ 2019	22 မှတ်ချက်
Startup Grind Shortlists Zeevou ကိုဥရောပညီလာခံအတွက်
Startup Grind မှရွေးချယ်ထားသောစာရင်း Zeevou Startup Grind သည် Zeevou ကိုရွေးချယ်ထားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၎င်းမှာပါဝင်သည်
15 ခုနှစ်ဧပြီလ 2019	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
12 ခုနှစ်ဧပြီလ 2021	မှတ်ချက်မရှိသေးပါ